Ubomi phantsi kwelanga elitshisayo bukho phakathi kweso sithuba. Ayikwazi ukubizwa ngokuthi uyavuya kwaye engenakufihla. Nokuba uhlobo lwesilwanyana lithetha ngalolu hlobo: ukusuka kwamehlo ukuya emacaleni omlomo, njengemifanekiso yezinyembezi, welula amabini amnyama amnyama, unike isihlwele ibukeka buhlungu kwaye bubuhlungu.
Ufanele aphile imihla ngemihla kwiindawo ezifudumele ze-Afrika, ukuzingela nokulawula ukutya inyama yakhe, ukukhusela imbewu kunye nensimi kwizilwanyana ezinamandla.
Yonke le nto yenza i-cheetah - ikati yangasendle eyingozi kakhulu. Nangona iimeko ezinjalo ezingabonakaliyo, unesimo esithandekayo nokuthanda uxolo. Ezi ziyikati zinyani, nangona kunjalo, yinyama encinane. Kwaye izandi ezikhutshwe ngabo zifana nezo ziqhelekileyo.
Xa i-cheetah - ikati yangempela yasendle inelisekile kwaye igcwele, ikhupha njengekati enkulu yasekhaya. Ngezwi lakhe unokuva phantse zonke izandi ezizodwa kwizilwanyana zasekhaya. Ukusuka kwi-purr ephezulu, umzimba wonke we-cheetah uhamba. Oku kukhangeleka ngokukodwa xa yonke intsapho ye-cheetah kwi-chorus ibonisa isimo esihle kakhulu. Izilwanyana ezikhulayo ziyakhula, zikhule, zidibanise kwaye zihluthe amazinyo. Izingane - zinyani kunye nomkhwelo. Ezi izandi zetsimbi zisoloko zifana nezandi zeentaka. Le "ntaka ephikisayo", epapashwa ngabantu abadala, ingavalelwa kumgama wamakhilomitha amabini - ngoko iifama zixubusha kunye neentsapho okanye iibhokhwe.
Ubunzima bemilinganiselo yesilwanyana ngu- 40-60 kg. Ukukhanya, kunye nesakhiwo somzimba esihle, esivumela i-cheetah ukuba iphucule ijubane elihle ngexesha lokuqhutywa. Sekudala ende imilenze emilenze, umzimba omzimba, umqolo onomsoco kunye nomsila omde, owanceda ukujika ngokukhawuleza kunye nokukhawuleza ngokukhawuleza, ngokukodwa xa amaxhoba ezama ukusinda kuye. Ukuba irhamncwa ilungelekile, akukho phantsi kwithuba lokukhupha ixhoba. Ukungabikho kwamandla afanelekileyo kwimpembelelo, umzekelo, njengengonyama, ihlawulelwa yisantya, esona sixhobo esona sikhulu kunye nenzuzo enkulu kulona. Ukuhlaselwa ngokukhawuleza, ufuna iimitha ezili-15 ukuya kwe-20-ukuhamba kweemitha ezili-6 ukuya kwe-8 kumvumela ukuba athathe ixhoba lakhe kalula. Kwindlela encinci ye-cheetah eya kwixhoba-yonke i-cat's facies. Ukuchukumisa intloko yakhe, ukusebenzisa indawo engafanelekanga, udibana nexhoba lakhe kumgama wama-80 ukuya kwe-120 m, elandelwa yinto emfutshane kodwa ngokukhawuleza. Ukuba isilwanyana esilandelayo asiwele emilenzeni ehlanjwe yesikhonyane-inkomo yangempela yasendle kwimizuzwana yokuqala yokuhlaselwa, iyakusindiswa: i-cheetah ilula ukuqala kwakhona kunokulandela i-antelope ebalekileyo ixesha elide. Ngokomyinge, isiqingatha sazo zonke izihlaselo eziqalisiweyo siphelo ngempumelelo. Ukuze kuqinisekiswe ukunqoba, isilwanyana sinokukhetha iilwanyana ezibuthakathaka emhlambini. I-sneaks iphikisana nemoya, ukuze ixhoba elingenakuchukumisa litshatyalazi elisondelayo. Umbala we-spotty kunye ne-dexterity kuvumela ukuba i-cheetah ihambe ingabonakali kude nokuba ingayisebenzisa njani iimpawu zayo kwi-sprinter. Iingqungquthela ezimbalwa zingathatha inxaxheba ekuzingeleni ukuba zihlala kunye. Oku kwandisa kuphela amathuba abo okuphumelela. Kodwa ixhoba libulawa yi-cheetah eyaqala ukuhlaselwa. Ngokungafani nezinye izilwanyana, lesi silwanyana asize sondla ixhoba elibulewe ngumnye umntu, kwaye ngokuqinisekileyo asifumani nantoni na. Ekukhethweni kokutya, uyabakhathalela ngokukhethekileyo. Kodwa ukuba iintsuku eziliqela ngokulandelelana, akukho nto yokuzingela iphelela ngesidlo sasemini, ngenxa yokulamba, unobuthakathaka, ukuze amathuba okuphumelela athathwe.
Kulungile, nokuba yintlanzi enobumnandi - i-cat yangasese yelinye ixesha kufuneka ilahle imigaqo yayo. Khetha izinto ezikhethiweyo aziyi kuyenza, kodwa kufuneka ucoce iipaws zazo, ezikhethiweyo. Ukuba uhlala unqabile ukuya echibini, unokubamba, nangona ininzi intaka elahlekile. Hayi-hayi, kodwa konke ukutya okufanayo. Nangona kunjalo, ukuhlaselwa okunjalo kusetshenziswe ngokukhawuleza. Kwaye akunjalo nangokucoceka kunye nokwesaba ukuhlambalaza. IziLwandle zihlala zifakwe emzimbeni wamanzi, ebonakala ngamakati azama ukuphepha iintlanganiso kunye. Ngesizathu esifanayo, banokuphepha ngaphandle kwamanzi kwiiveki ezimbalwa. Kwaye kwezo zihlandlo ezinqabileyo xa i-cheetah ifuna ukuzalisa ukungabi nomswakama emzimbeni, uyayilumkisa kwaye ilumkele. Ukuba isingqimba sobomi bala ma-super-cats sisilumko kunye nokuphumelela ukuzingela kulandela ishedyuli, ukutya kwabo okuqhelekileyo kubandakanya i-Thomson ghazals, i-impala, i-hares, imvundla nezinye izilwanyana ezincinci. Kodwa ukuba i-cheetah ayizange ihlupheke ngenxa yokungondleki kwaye yayineendawo zokugijima emva kwexhoba layo, indawo yokuzingela ayiyi kuba ngaphantsi kwe-100-150 km2.
Ukuthathwa kwixhoba liyingxenye yesiqingatha somsebenzi. Ukukhuselwa kwayo kunokuba nzima kunzima. I-Cheetah nayiphi na indleko ikhuphe ukungquzulana nezinye izilwanyana, nokuba ziyingonyama endala, i-jackal okanye i-hyena. Ewe, zinkulu kunezibini zokugqibela, kodwa ubungakanani bazo abuya kunoma yikuphi ukuthelekiswa kwimihlathi eqinile neyomeleleyo yalezi zilwane. Ngoko xa utshaba luya kwidla elibanjwe ngeteketra, ngoko akukho nto esele yenziwe kodwa ihlala phantsi.
Ukuzingela kuya kufuneka kuqalwe ngokutsha. Ukongezelela, xa ixhoba liyabanjwa kwaye libulawa, i-cheetah iyimfuneko enkulu yokuphumla. Konke malunga ne-physiology yerhamncwa: ikhula ngesivinini esikhulu, kwaye nangaphantsi kwelanga elitshisa. Ubushushu bomoya obubungaphakathi bukhuphuka ngokukhawuleza kwaye ukuba i-cheetah ayigodli kwaye ipholile, ngoko kushushu ukugqithisa okunzulu kunomngcipheko kumonakalo wengqondo nokufa. Nangona kunjalo, le miphunga kakhulu efunekayo ingabiza - ukuba kukho enye iidemon ezikufuphi, i-cheetah iya kuba yinto yokutya. Ixhoba layo lilula ukuntsba, kuba ubunzima obuncinane beli silwanyana bujoliswe ngokukhawuleza kunokusebenza ukulwa. Ngamanye amaxesha umhlambi wezilwanyana okanye iinkumba zingathatha isidumbu esivela kwisiqhwa, sinoyikrakra ngokumemeza kwomsindo nokuphosa amaphiko ayo. Ngokukhawuleza, ukukrokra kwabakhwela kuya kuqhuba amahayi, amajungulu, iimbonqa okanye iingwe. Ngoko ke, ukuze ufumane ukutya uze uyidle, i-cheetah - ikati yangasendle yangempela-kufuneka iyenze yonke into ngokukhawuleza kunokwenzeka: ukuphishekela, ukubulala nokutya.
Kwintsapho ye-cheetah, umzali omnye ungumama ongatshatanga, ofuna ukulungiselela amathole akhe ngobomi obunzima. Emva kokuzalwa kwabancinci, ubheka indawo yokuzifihla kunye nokukhusela abantwana kwizilwanyana. Kwaye ekubeni i-den ingayifani ne-den, "igumbi labantwana" likhona, njengommiselo, phakathi kwehlathi elihle. I-female cheetah iyabakhusela abantwana bayo ngokungahloneliyo kwaye ifihlike ngokupheleleyo kwiintshaba, ithwele abancinci ukusuka kwindawo ukuya kwindawo ngexesha lokuqala lokuphila kwabo.
Ukucoca akusiyo nje isiqinisekiso sempilo yenzalo yakhe, kodwa sinesiqinisekiso sokuthi akuyi kubakho intshaba ekhangelwa kukuvumba okuqhubekayo. Nangona kunjalo, nangona zonke iinzame zoomama ukukhusela abantwana babo kwiinkathazo, inxalenye yesithathu yabantwana abaseluntwini bayasinda baze babe ngabantu abadala. Olunye umsebenzi kukukhusela ama-kitt ngexesha ngexesha lokutya. Iingonyama okanye ezinye izilwanyana kwithuba lokuqala alisuse kuphela isidumbu, kodwa libulale le ncinane.
Ngokuqhelekileyo ibhinqa kufuneka iququzelele iintshukumo eziliqela ngosuku lokutya abantwana bayo. Ukususela ebuntwaneni beselula, phakathi kweentlanzi ezincinci, kubakho uqhina oluqinileyo lweentsapho. Bakhula ndawonye, ​​badla kwaye badlala, kwaye njengabantu abadala bahlala kunye bazingela ndawonye. Baya kuhlala kunye nangaphambi kokuguga. Abafazi abancinci kuphela baya kuba nabancinci. Isifundo esona sifundo esincinci sifanele sifunde kwiinyanga zokuqala zobomi kukuzingela. Kubantwana, iqala ngemidlalo. Ukuxhathana, ukubamba nokubetha, baphucula izakhono zabo. Nangona umama ezingela, baxelelwa ukuba bahlale bezolile kwiindawo ezinzima kwaye bangaphazamisi ukuze bangabesabisi ixhoba okanye bafumane ngaphantsi kweentonga. Kwaye ekubeni benesidanga sokuzingela ukususela kwiminyaka yobudala, banokuphuma ngaphandle kwexesha kwaye "bancede" umhlengikazi wabo. Unina akanakho ukhetho kodwa ukuqala ukulandelela nokuhlasela kwakhona.
I-cheetah zizimeleyo ngonyaka kunye nesiqingatha. Ngalesi sikhathi, umama onothando akasakwazi ukukhangela, ukubamba nokubulala ixhoba lezinkukhu eziye zakhula kuye ubukhulu bayo. Ukushiya kwakungenabuhlungu kakhulu, umama ushiya iikhukhu ezikhulile phantsi kwengubo yobusuku, ehamba kude nabo kunokwenzeka. Ukususela ngeli xesha umncinci omncinane uqala ubomi bomdala. Ibhinqa kwiinyanga ezimbalwa iya kuba ilungele ukunikela ubomi kwintsana entsha ebonwe ngokukhawuleza.
Iilwanyana ezifuywayo ngophawu lwezodiac
Isaladi kunye nama-casseroles kunye neembotyi
Yintoni ijongene iliso lasekunene?
Zikhusele wena kunye nosapho lwakho kwizifo eziyingozi
Isobho lomgquba kunye nembewu yepoppy
Prophylaxis ye-Orz kubantwana
Umntu wamanje - umkhuseli wabuthathaka
Ukwakha - ukuqeqeshwa kwezihlunu zendawo esondeleyo
Iimodeli ezingumfanekiso zikaClarins Lift-Affine
Isaladi kunye noshicikile
Iinqebengwane ze-lemon ngeenkonkxa zepine
Indlela yokuchazela kumyeni wam ukuba umama-mkhwenkwe ungeyonto
Indlela yokuthatha imeko enzima ezandleni zakho